Madaxweyne Mustafe oo Tababar usoo xidhay 3,217 askari oo ku biiraya ciidanka xoogga gaarka ee DDS - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Madaxweyne Mustafe oo Tababar usoo xidhay 3,217 askari oo ku biiraya ciidanka xoogga gaarka ee DDS
On Apr 11, 2021 886
Addis Ababa,Apr 11, 2021 (Miyasiya 03,2013 T.I (FBC/SOMALI)-Madaxwaynaha DDS, Mudane Mustafe Muxummed Cumar ayaa munaasibadii tababarka loogu soo xidhayay cutubyo ka mid ciidanka gaarka ah ee DDS ka yidhi”Shalay madax Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed saxeexday ayaa jirtay, ciidan Soomaaliyeed oo shacab Soomaali ah lagu laynayey ayaa jiray, maanta labadaa midna ma jirto.”
Xerada tababarka ciidanka ee Gaashaanle Khadar ayaa maanta tababar loogu soo xidhay 3,217 askari oo muddo afar (4) bilood ah tababar ku jiray, kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga gaarka ah ee DDS.
Xafladda qalin-jabinta ciidankani waxaa ka soo qeyb-galay Madaxwaynaha DDS Mudane Mustafe Muxumed Cumar, hoggaanka Xafiiska Nabadgalyada DDS Dr. Xuseen Xaashi Qaasim, masuuliyiinta sare ee hay’adaha amniga iyo marti sharaf kale.
Mudane Mustafe Muxummed Cumar Madaxwaynaha DDS, ayaana salaan sharafeed ka guddoomay ciidanka, xilli ay soo bandhigayeen gaardi-ciyaar aad u qurux badan oo jaan iyo gacanba la isla helay.
“Sun laguu qooshay, kol bay malab iyo dawo kuu noqotaa.”
Madaxwaynaha oo maah-maahdaa kore soo qaatay ayaa sheegay in ay kala soocnaadaan qaabkii lagu aas-aasay Ciidanka Xoogga Gaarka Ah Ee DDS iyo qaabka uu yahay maanta.
“Markii hore waxaa loo aas-aasay in ay la dagaallamaan oo ay laayaan shacabka ay ka dhasheen, u dhasheen, laakiin ciidanku hadda waa ciidan u taagan ilaalinta karaamada, sharafta iyo sugidda nabadgalyada shacabkooda.” M/Mustafe Muxummed.
“Ciidankani waa ciidan ilaalinaya nabadgalyada Deegaanka ugu ballaadhan dalka Itoobiya.” ayuu yidhi Madaxwaynaha DDS.
Madaxwaynaha ayaa sidookale ugu baaqay ururrada mucaaradka ah in ay joojiyaan isku dayga si’khaldan-u’adeegsiga xoogga ciidanka Deegaanka oo uu madaxwaynuhu ku tilmaamay “Khad-cas” oo lama taabtaan ah.
Sidoo kale, madaxwaynuhu isagoo ka hadlaya mucaaradka ayaa wuxuu yidhi; “doorasho iyo khal-khal-abuurid way kala duwanyihiin. waxaannu diyaar u nahay in doorashadu ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah oo madax bannaan, laakiin ciddii isku dayda in ay khal-khal abuurto, nabadda uu shacabku haystana carqaladayso, sharciga ayaannu la tiigsan, loomana dul qaadan doono.”
Hoggaanka Xafiiska Nabadgalyada DDS Dr. Xuseen Xaashi Qaasim, ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Gaarka Ah Ee DDS uu yahay tiirka kaliya ee uu ku taaganyahay Deegaanka Soomaalidu, sheegayna in ay sii xoojinayaan tiradooda iyo tayadoodaba.
Ciidankani hadda tababarka dhammaystay ayay ku jiraan 1,000 askari oo ah ciidammada sida gaarka ah u tababaran ee afka qalaad loogu yaqaanno Komaandoos (commandos). Waxaana xusid mudan in ay horey u jireen 250 askari oo Komaandoos ah, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 1,250 komaandoos oo dhammaantood isbaddalkii kaddib la tababaray.
Ciidankani ma noqonayo kii 1aad ee tababar loo soo xidho, balse isbaddalkii kaddib waxay xukuumaddu billowday dadaallo lagu kobcinayo tirada, tayada iyo nolosha Ciidanka Xoogga Gaarka Ah Ee Deegaanka.
Ciidanka Xoogga Gaarka Ah Ee Deegaanka Soomaalida ayaa ah xoog ciidan oo u taagan difaacidda qadiyadda shacabka, sugidda amniga, nabadgalyada iyo xasilloonida bulshada Deegaanka Soomaalida, waana ciidan leh tababar dhammaystiran, qalab iyo gaadiid ay kaga jawaabi karaan xaalad walba oo dhacda.